खाद्य कम्पनीको चामल कुहाउने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति ! – Online Saptarangi
October 16, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on खाद्य कम्पनीको चामल कुहाउने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित गोदाममा रहेको लाखौं रुपैयाँबराबरको चामल कुहाउने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ ।
सो गोदामको चामल खान योग्न नभएको भन्दै १ पुस २०७६ मै ‘नष्ट गर्नुपर्ने’ भनेर मुचुल्कसमेत भइसकेको छ । सो चामल नष्ट गर्नुबाहेक विल्कप नरहेको अवस्थामा अख्तियारले कम्पनीका कर्मचारीलाई कारबाही हुनबाट बचाउन विभिन्न खेल खेलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । याे खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा छ ।